Home News Isbaarooyin Horleh Oo Lagu Arkayo Wadada Xiriirisa Walaweeyn Iyo Afgooye
Maamulka degmada Wanlaweyn ee gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in dowladda federaalka u gudbiyeen isbaarooyin yaalla wadada isku xirta degmadaasi iyo Afgooye.
Maxamed C/laahi Cumar oo ah guddomiye ku xigeenka dhanka maaliyadda ee maamulka degmada Wanlaweyn ayaa sheegay in shacabka ku safra wadadan ay dhibaatooyin badan qabaan.
“Waxaa ay dadka ka cabanayaan waa wax Muuqdo waxa ka jira inta u dhaxeysa Afgooye iyo Wanlaweyn waxaa la dhihi kaaraa gumaad waa meel lagu gumaado Shacabka Soomaaliyed marna Asxaan looguma sameeyo waxaan documentiyo badan gaarsiinnay Wasaaradda gaashaandhigga iyada ayaana jawaab ka sugeynaa”.
Isbaarooyinka yaalla wadada u dhaxeysa Afgooye iyo Wanlaweyn ayaa ah kuwo badan iyada oo halkaasi gaadiidka looga qaado lacago badan.
Previous articleYaqsigii Badalilahaa Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo La Ogaaday
Next articleGudoomiyaha Gobolka Banaadir Oo Boorsooyin Lacago Kala Dhoofay Muqdisho iyo Baaritaan Ku Socda!
Gabar Soomaali ah oo Meeydkeeda laga helay guri ay ka deganeed...